Bilaogy Iraniana: Fikomiana Ao Amin’ny Oniversite, Ahmadinejad Any Amin’ny Firenena Mikambana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Novambra 2017 0:36 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny Novambra 2005)
Nifidy mpitondra fivavahana sy profesoran'ny Oniversite, Ayatollah Amid Zanjani, ho Mpitantana ny Oniversite Tehran ny governemanta. Maro ireo fanontaniana sy ahiahy momba ny fampianarany sy ny tontolony ara-politika mpandala ny nentim-paharazana. Fanous, bilaogy iraisana, nanoratra fa tsy manana mari-pahaizana tany amin'ny oniversite Atoa. Amid Zanjani ary nanery ny safidiny tao amin'ny oniversite ny governemanta. Araka ny filazan'ny Fanous, samy namaky ny revolisionany Islamika sy ny boky fiaviany isika rehetra ao amin'ny anjerimanontolo ary mahafantatra ny rehetra fa tsy manana fifandraisana amin'ny anjerimanontolo & fikarohana ara-tsaina izy.
Nanohitra an'Atoa. Ali Zanjani ireo mpianatra ao amin'ny Anjerimanontolon'i Tehran. Voalaza fa nampitomboin'ny fitondrana Iraniana ireo mpitandro ny filaminana ao amin'ny oniversite. Hanif Mazroi mihevitra fa tsy misy dikany ny hetsiky ny mpianatra manohitra ny filoha vaovaon'ny anjerimanontolon'i Tehran. Nilaza koa izy fa manana diplaoma PhD tany amin'ny oniversite izy. Vaovao fanampiny avy amin'i Khalagi, mpikaroka Iraniana avy ao amin'ny Washington Institute, nampiseho fa diso izy tamin'izany. Araka ny filazan'i Khalagi, mpitondra fivavahana mpandala ny nentin-drazana akaiky an'i Motalefeh » (vondrona mpandala ny nentin-drazana hiringiriny) i Amid Zanjani ary imbetsaka izy no kandidàn'izy ireo tamin'ny fifidianana parlemantera . Izy no mpitondra fivavahana voalohany lehiben'ny Oniversiten'i Tehran, saingy nandritra ny roapolo taona farany teo, niaina fitantanana avy amina mpitondra fivavahana imbetsaka ny oniversite Iraniana.
Olana mafana iray amin'ny tranokala ary koa gazety iraisam-pirenena mihitsy ny tantaran'i Ahmadinejad ao amin'ny Firenena Mikambana. Nambarany nandritra ny kabariny tao amin'ny Firenena Mikambana, fa nisy hazavana nanodidina azyy (ny tiany lazaina dia hazavana mihoatra ny natiora).
Abthai (rohy amin'ny teny persiana), filoha lefitra teo aloha, nilaza fa amin'izany hazavana izany, ny tiany lazaina dia tsy azo ekena ao amin'ny fivavahanay ny fisian'ny Imam Miafina.